မန်းဂေဇက် ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ (ဂျုလိုင်လ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » မန်းဂေဇက် ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ (ဂျုလိုင်လ)
Posted by padonmar on Aug 13, 2012 in Best Web Awards, Creative Writing | 79 comments
Best Web Award ပဒုမ္မာရဲ့ ပုံပမာ
ကြက်သွေးရောင် ကတ္တီပါကားလိပ်ကြီး သည် လေပြေအဝေ့မှာ တလှုပ်လှုပ်လွန့်လူးလျက် ရွှေပွဲလာ ပရိသတ်ကြီးကို
ကတ္တီပါကားလိပ်အထက်တွင်ကား မန်းဂေဇက် ချစ်သူများစာပေဆု ရံပုံငွေ အငြိမ့်သဘင် နှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ဟူသော
နဖူးစည်းကြီးက ခန့်ညားစွာ တည်နေပါသည်။
ဇာတ်ခုံရှေ့တွင် မြန်မာဆိုင်းဝိုင်းကြီး နှင့် စန္ဒယားတို့က တစ်ဖက်တစ်ချက်စီနေရာယူထားကြသည်။
ပွဲကြည့်ပရိသတ် များအတွက် ဆိုဖာထိုင်ခုံများမှာ ဇာတ်ခုံကို “ပ”ပုံ ၀ိုင်း၍ ၃ တန်းခွဲ စီထားသည်။
အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် အလယ်ခုံတန်းတွင် မိသားစုများ၊ဘယ်ဖက်ခုံတန်းတွင် ရွာသူအပျိုချောများ၊ညာဖက်ခုံတန်းတွင်
ရွာသားလူပျိုမချောတချော၊မပြိုတပြိုများ ထိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
ရွာသားများမှာ အပျိုလေးတွေနားကပ်ထိုင်ခွင့်မရဟုသိရစဉ်က မကျေနပ်ကြသော်လည်း မေတ္တာလက်မှတ်များဖြစ်၍ ခန္တီစ
သို့သော် ထိုင်ခုံများစီစဉ်ထားပုံမှာ ရွာ့အလှလေးများကို မစောင်းတစောင်းလေး မြင်နေရမှန်းသိသဖြင့် ကျေနပ်သွားကြသည်။
ပရိသတ်ကြီးမှာ တဖွဲဖွဲရောက်လာပြီး ထိုင်ခုံနံပါတ်များကို ပါလာသော မေတ္တာလက်မှတ်များနှင့် တိုက်၍ မိမိတို့နေရာရှာနေကြသည်။
အခမ်းအနားစီစဉ်သူ ဗလာဒီမာရဲစည်မှာ ဆီးရီးယားမှ အချိန်မီပြန်လာပြီး ဂန္ဓာလရာဇ်ပြည်ဖြစ် LED လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကြီးတစ်လက်ဖြင့်
နေရာရှာသူများကို ဟိုသွားဒီသွားဟု အမိန့်ပေး usher လုပ်နေသည်။
ပရိသတ်များပိုများလာသဖြင့် ရဲစည် တစ်ယောက်တည်း မနိုင်တော့သောကြောင့် အရင့်ရောင်၊အလင်းဆက်၊ချစ်ရင်ထူး၊အီးတီ၊
ကိုရင်စည်သူ တို့က ကူပြပေးရင်း ကလေးငယ်များကို တွဲသယောင်၊အပျိုလေးများကို ဆွဲသယောင်၊အဖိုးကြီး အဖွားကြီးများကို
မမြင်သယောင်၊ကာလသားများကို မတူမတန်သယောင် လုပ်နေကြသည်။
ရွာ့ဓာတ်ပုံဆရာများဖြစ်သော ကိုစိန်သော့၊ရွှေမင်းသား၊Mလုလင်၊ရွှေထီး၊ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်၊တို့နှင့်အပြိုင်
ရွာသူဓာတ်ပုံဆရာမလေးများဖြစ်သော ညလေး၊သကြားလုံးကြော်၊We R One တို့ကလည်း အားကျမခံ လက်စွမ်းပြနေကြသည်။
Flash အရောင် တဖျပ်ဖျပ် အောက်တွင် ရွာသူလေးများအဖွဲ့ကလည်း နေကြာစေ့၊အချဉ်ထုပ်၊အာလူးကြော်၊ငါးမုန့်ကြော်ထုပ်များနှင့်
ရေသန့်ဘူး ဆွဲလွဲပြီး နေရာယူကြသည်။
အပျိုလေးများအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော သဂျီးသမီးချာတူးက “ပါပါကပြောထားတယ်။ဗမာတွေ ပွဲပြီးလို့ပြန်ရင် အမှိုက်တွေ
ပွကျန်နေတတ်တယ်၊အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်အောင်မထည့်ကြဘူးတဲ့၊ပါပါစိတ်ချမ်းသာအောင် ၊အ၀မှာ အမှိုက်ပုံးထားပေးပါတယ်အထဲရောက်အောင်လည်းထည့်ကြပါ”ဟု
ပြောနေသော်လည်း အချင်းချင်း ရေပက်မ၀င်ပြောနေရသောကြောင့် မကြားကြဘဲ အောက်သို့သာပစ်ချနေကြသည်။
ရွှေကြည်၊ရွေအိ၊ရွေပုံ့၊ချယ်ရီနွယ်၊ငြိမ်းငြိမ်း၊မနောဖြူလေး၊မမအုံ၊ ကြေးမုံ၊WOW၊မွန်ကစ်၊မေဂျူလိုင်၊နှင်းဆီငုံ တို့မှာ အလှဆုံးပြင်ဆင်လာကြသဖြင့်
အပျိုကြီးများဖြစ်သော အေးကေကေ။အန်တီမိုး၊မအိ၊သည်းနုအေးတို့ကလည်း အားကျမခံ စတော့ကင်၊စကဒ်တို၊ကြိုးတစ်ချောင်း
အလယ်မိသားစုတန်းရှေ့ဆုံးတွင်ကား မန္တလေးမှပင် လာရောက်အားပေးသော တီချာကြီးမှာ ရန်ကုန်မှရွာသူားများကို
ယခုမှတွေ့ရသဖြင့် “ လာနှုတ်ဆက်သူတိုင်းကို ပျူပျူငှာငှာဆက်ဆံကြနော်”ဟု သားလေး ကိုဆန်နီ ၊မြေးလေး မောင်ပေတို့ကို
(ပင်လယ်ပျော်၊ခိုင်ခိုင်နှင့် သမီးလေး မိသားစု)နှင့် (ရွှေတိုက်စိုး၊အုပ်အုပ်နှင့် သားလေးမိသားစု)မှာ လက်မှတ်ထပ်နေသဖြင့်
ငြင်းနေကြပါသည်။ဗလာဒီမာရဲစည် ကြားလိုက်ရ၍ အမြန်လာပြီး တောင်းပန်ကာ ရွှေတိုက်စိုးတို့မိသားစုကို ရှေ့ဆုံးတန်း၏ရှေ့၌
ထို့နောက်တန်းတွင်ကား အာဂ၊နွယ်ပင်နှင့် ဒို့ဘိုးဘွားအမွေဆက်ခံမည့်သားလေး ငါကွ တို့မိသားစု၊
ရွာ့သမက်ကြီး၊မှီနှင့် သားသား၊မီးမီး တို့မိသားစု၊
ရွာစားကျော်၊ရှင်မွေးလွန်းနှင့် သားလေးဖိုးသောကြာ မိသားစု၊
ဒေါက်တာ YKKO ၊အိတုန် နှင့် သားအမွှာလေး ၂ယောက် မိသားစု၊
မစ္စတာ နိုဗွီ၊မနိုဗွီ၊သမီးလေးဂျူနို မိသားစု၊တို့ကလည်း အသီးသီး နေရာယူကြပါသည်။
အော်ဇီ မှ ကိုဘုန်းကျော်၊ဇနီး ၊သားသားနှင့်မီးမီး မိသားစု၊
ဆင့်ကာပူရ(ခရက်ဒစ် တူ ရှုံးလူ)မှ မိုချို၊သူ့ အိမ်ကလူကြီး နှင့် သားလေးတို့မိသားစုလည်း ပြန်လာ၍ အားပေးကြပါသည်။
ညာဖက်မှ ရွာ့ကာလသားများမှာ မထိုင်နိုင်ကြသေးဘဲ အလယ်ခုံတန်းကိုကျော်ကာ ဘယ်ဖက်မှ ရွာ့ကွမ်းတောင်ကိုင်များကို
ပါဝါတစ်သောင်း မျက်ကပ်မှန်လုပ်၍ ကြည့်ရင်း ဖွက်ယူလာသော ဘီဘီများမော့နေကြပါသည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ခံ အမတ်မင်းမှာ သူရ၊ဖက်တီးကက်၊၊ဘဲဥ၊ဘဘဖရဲ၊နွေဦး၊The Best၊ Ster၊ မိုင်ဆွန်ခ၊နီဂိမီ၊
ဘီလူးကြီး၊မောင်သန်းထွဋ်ဦး၊ကက်ပတိန်အမေရိကား၊ကမ်းကြီး၊သာလိကာ၊ ရဲရင့်လှိုင်၊ပိုင်လေး၊မောင်ဘလှိုင်၊ကိုဝင်း၊မိုးမင်းသား တို့ လက်ထဲမှ
ယောင်္ကျားလေးသုံးရေမွှေးများ(ဒါလည်းခရက်ဒစ်တူ ရှုံးလူပါဘဲ)ကို သိမ်းရကောင်းနိုး၊ဘော်ဘော်တွေမို့
ကြောင်ကြီး၊ကြောင်လတ်၊ကြောင်လေး တို့မှာ ကြောင်ဂိုဏ်းဝင်ချင်သည်ဆိုသော သကြားလုံးကြော်အတွက် နာမည်ပေးရေး
အခြေအတင်ဆွေးနွေးနေကြပါသည်။ကြောင်မျိုးနွယ်များ တိုးပွားရေး ဒို့အရေးဟု ပွဲသိမ်းလျှင် တိုင်ပေးရန် ညှိနှိုင်းနေကြပါသည်။
ပုပု နှင့်ဖြိုးမှာ ဘယ်ဖက်တန်းမှာ ထိုင်ရမလား၊ညာဖက်တန်းမှာထိုင်ရမလား ရွေးရခက်နေကြသည်။
ကိုထွန်းဝင်းလတ်မှာ အ၀င်ဝတွင် ဖလားတစ်လုံးနှင့် အလှူခံနေသည်။
ရွှေအိမ်စည်၊ကောင်းမြတ်ထွဋ်နှင့်သူရဿဝါက လာသောပရိသတ်မှတ်တမ်းကို ကွန်ပူတာဖြင့် တစ်ခါတည်း
ရက်ကော့ယူရန်ကြိုးစားနေသော်လည်း ပရိသတ်ကြီးမှာ သူတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ သွားချင်ရာသွား၍ အချင်းချင်း
၀မ်းသာအားရနှုတ်ဆက်နေကြသောကြောင့် ခေါင်းသာ အတွင်ကုပ်နေကြရပါသည်။
သတင်းထောက် မြတ်ကျော်ကလည်း သတင်းရယူနိုင်ရန် အင်တာဗျူးရမည့်သူလိုက်ရှာနေသည်။
မိသားစုများမှ ပါလာသော ကလေးငယ်များက ပျင်းလာသောကြောင့် ပွဲထွက်ပါတော့ဗျို့ ဟု အော်ကြပါတော့သည်။
ဤသို့ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် စည်ကားနေစဉ် ဇာတ်ခုံရှေ့ ဆိုင်းဝိုင်းနှင့် စန္ဒယားမှ ကမ္ဘာမကြေတီးလုံးပေါ်ထွက်လာရာ ပရိသတ်တို့မှာ
မထချင်ထချင် မတ်တပ်ရပ် အလေးပြုကြရပါသည်။
တီးလုံးဆုံးလျှင် ကြက်သွေးရောင် ကတ္တီပါကားလိပ်ကြီးမှာ တရွေ့ရွေ့ တက်သွားပြီး ဇာတ်ခုံ လယ်တွင်
ပန်းရောင်ထိုင်မသိမ်းဝတ်စုံဆင်မြန်းထားသော အသက်၁၅ နှစ်ခန့် အသားဖြူဖြူ၊မျက်ဝန်းကျယ်ကျယ်၊နှာတံပေါ်ပေါ် မင်းသမီးလေးနှင့်
ဘယ်ဖက်တွင် ပုဆိုးဝါ+စိမ်းကွက်၊ခေါင်းပေါင်းဝါ၊ဖဲအကျီင်္ဝါ ၀တ်ထားသော လူရွှင်တော် ၄ဦး၊ညာဖက်တွင် ပုဆိုးနီ+မည်းကွက်
၊ခေါင်းပေါင်းပန်းရောင်၊ဖဲအကျီင်္နီ ၀တ်ထားသော လူရွှင်တော် ၄ဦး(လူရွှင်တော်တွေကတော့ အရုပ်ဆိုးဆိုး အဖိုးကြီးတွေချည်းပဲမို့
လက်အုပ်ချီကန်တော့လျက် ၊နောက်ဖက်တွင် ကျောပေးလျက်ထိုင်နေသော မင်းသမီး ၃လက် တွေ့ရပါသည်။
ပန်းရောင် မင်းသမီးလေးက မိတ်ဆက် စကားစတင်ပြောကြားပါသည်။
“ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိပါရှင်၊
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ရွှေပွဲလာ မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့ရှင်၊
သမီးကတော့ မန်းဂေဇက် ချစ်သူများ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ရှေ့ထွက်မင်းသမီးလေး ပဒုမ္မာဖြစ်ပါတယ်ရှင်၊
သမီးတို့ အငြိမ့်အဖွဲ့ကြီးဟာ တကယ့် အနုပညာရှင် ပဂေးကြီးတွေ မဟုတ်ဘဲ အပျော်တမ်း ၀ါသနာရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်
အမှားအယွင်း အချွတ်အချော်လေးတွေများတွေ့ရင်လည်း အပြစ်တော်မ၀င်ဘဲ အချစ်တွေသာဝင်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
သမီးနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ချစ်ပရိသတ်ကြီးကို ဖျော်ဖြေအသုံးတော်ခံမယ့် လူရွှင်တော်ကြီးများကတော့
သမီးရဲ့ ညာဖက်က ဘဘ မန္တလာ ကိုပေါက်၊ ဘဘ ချိုပေါ့ကျ ကိုဘလက်၊ဘဘ ဂျာပွန်ပြန် ဗရမ်းသပွတ် ကိုလင်းဝေ၊ဘဘ
ဘူတန်ပြန် အမြန်ရထားကြီး ကိုနိုဇိုမီ တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
(ညာဖက်မှ လူရွှင်တော်ကြီးများက ပရိသတ်ကို ဦးညွှတ်ကန်တော့လျက်)
သမီးရဲ့ဘယ်ဖက်ကတော့ ဘဘ စီဂျေကြီး ကထူးဆန်း၊ဘဘ အကြော်သယ် ဦးကြီးမိုက်။ဘဘ အဆဲခံချင်တယ်ဦးဖေါ၊ ဘဘ
ဖားမြွေဖွတ် အင်ဇာဂီ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
(ဘယ်ဖက်မှ လူရွှင်တော်ကြီးများက ပရိသတ်ကြီးကို လက်အုပ်ချီလျက်)
သမီးတို့ကို အားဖြည့်ပေးမယ့် မြန်မာသံတေးဂီတ အတွက်ကတော့ ၀ိုင်းတော်တီး စိန်ဗိုက်ဗိုက် (စိန်ဗိုက်ဗိုက်ပေါ် မီးဆလိုက်
ထိုးပေးထားစဉ် စိန်ဗိုက်ဗိုက်မှ မင်းအုပ်စိုးအိုက်တင်ဖြင့် စံတော်ချိန်တီးလုံးကို အားရပါးရတီး၍အသုံးတော်ခံ) နဲ့
အနောက်တိုင်းတေးဂီတ အတွက် စန္ဒယားမြို့မခိုင် (မြို့မခိုင်ပေါ် ဆလိုက်ထိုးပေးစဉ် ကိုဝင်းဦးအိုက်တင်ဖြင့်
စန္ဒယားဘေးချထားသော ရမ်ပုလင်းမှရေနွေးကြမ်းကို ဖန်ခွက်ထဲငှဲ့ထဲ့၍ တစ်ကျိုက်တည်းမော့လိုက်ပြီး မှုန်ရွှေရည်တီးလုံးကို
မီးအလင်းအမှောင် နဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးတာကတော့ အီလက်ထရစ်ချန်ပီယံမောင်မောင်အံ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်
(မောင်မောင်အံမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆလိုက်ထိုးပြရန် မဖြစ်နိုင်သဖြင့် သူ့မျက်နှာကို ပရိသတ်မြင်ရန် ရဲစည်လက်ထဲမှ
အားလုံးထဲမှာ သမီးက အငယ်ဆုံး၊၀ါအနုဆုံးပီပီ ချစ်ပရိသတ်ကြီးများ မင်းသမီးတစ်လက်ထက်တစ်လက် ပိုမို၍ အနုပညာအရသာ
ခံစားသွားရစေဖို့ သမီးရဲ့ ဘဘ ဇာတ်ဆရာကြီး ဦးဦးပါ က စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။
ပရိသတ်ကြီးကိုကျောပေးပြီး မိတ်ကပ်ဖို့ရင်း မှန်ထဲက ချောင်းကြည့်နေတဲ့ သမီးရဲ့ မမတွေနဲ့လည်း ချစ်ပရိသတ်ကြီးကို
အ၀ါရောင် ၀တ်စုံလေးနဲ ပိန်ပိန်ပါးပါးလေး လှနေတာကတော့ ၁၆ နှစ် သမီး ဗုဒ္ဓဂါယာပြန် မင်းသမီးချောလေး“ချစ်မမ”ပါရှင့် ၊
ခရမ်းရောင် ၀တ်စုံလေးနဲ့ လှရက်သူကတော့ ၁၇နှစ်သမီး ယူနိုက်တက် ကလဒမ်းပြန် “လတ်ခင်ခင်”ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်၊
နောက်ဆုံး မိတ်ဆက်ပေးရမယ့် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကတော့ သမီးတို့ထဲမှာ သဘာအရင့်ဆုံး
ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်တဲ့ တညင်ပြန်ဖားအောက်ပြန်ထားဝယ်ပြန်မော်လမြိုင်ပြန်တစ်ပြည်လုံးပြန် “နှင်းဝေေ၀” BSc(Easy Cook) ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ။
(လက်ခုပ်သံများ အရှည်ကြာဆုံး ဂင်းနစ်စံချိန် ကျိုးသွား)
အဖွဲ့သားတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးအပြီးမှာတော့ ဆုပေးပွဲမတိုင်မီ သမီးက ချစ်ပရိသတ်ကြီးကို
“ဘ၀ဇာတ်ဆရာအလိုကျ ဆိုခဲ့ရ ကျမဘ၀ပါရှင်…………………”
သီချင်းတစ်ပိုဒ်ဆိုပြီး အကဆုံးသော် မန္တလေးမှ တီချယ်ကြီးက သဘောကျသဖြင့် မြေးလေးမောင်ပေအား ဆုတော်ငွေ ငါးထောင်ကျပ်
ကို စင်ပေါ်တက်၍ ဆုပေးစေပါသည်။
ထိုအခါ ရန်ကုန်မှ ပင်လယ်ပျော်နှင့် ခိုင်ခိုင်က အားကျမခံ ဆုတော်ငွေ တစ်သောင်း ၊
ဆင့်ကာပူရမှ မိုချိုနှင့်မိသားစုမှ စင်းဒေါ်လှ ၁၀၀၊
အော်ဇီမှ ကိုဘုန်းကျော်နှင့် မိသားစုက အော်ဇီဒေါ်လှ ၁၀၀ တို့ကို အဖွဲ့သားများသို့ ဆုချသွားပါသည်။
မင်းသမီး ပဒုမ္မာ က
“သမီးလေး ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်လို့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ထပ်မံဖြေဖျော်သွားပါမယ် ”ဟုဆိုပြီး
“အငြိမ့်မင်းသမီးများ ရည်းစားထားတဲ့ လူဆိုတာမျိုးဟာ…
သဘောထားလည်း ကြီးအုံးမှပေါ့ သခင်ရယ်………..”သီချင်းနှင့် ဖြေဖျော်ကာ အကပိုဒ်အဆုံးတွင် ဇာတ်ခုံ ညာဖက်မှ
ကာလသားများဖက်သို့ မျက်စပစ်၍ ကတ္တီပါ ကားလိပ်ကြားသို့အ၀င် ဗလာထမီနားငြိပြီး ခြေချော်ကာမှောက်ရက်လဲသွားသောကြောင့်
ကတ္တီပါကားလိပ်ကြီးကို ကိုယ်တိုင် ကြိုးဆွဲနေရသောဇာတ်ဆရာကြီး ဦးဦးပါက ပြည်ဖုံးကားကြီးကို
အမှတ်မရှိသေးသော ပဒုမ္မာမှာ ခြောက်လက်မ ပင်ဆယ်ဟီးကိုစီးပြီး ထိုင်မသိမ်းအစား မြန်မာချည်ထည်ဝတ်စုံ
အဖြူရောင်လက်ရှည်နှင့် အဖြူခံပေါ်ရောင်စုံချိတ်ကိုဝတ်၍ ဇာတ်ခုံ ညာဖက်မှ ထွက်လာပါသည်။
ဇာတ်ဆရာကြီး ဦးဦးပါ မှာ ဖဲတိုက်ပုံ အနက်ပေါ်တွင် ကနုတ်ပန်းပုံ စီးကွင့်ထိုးလျက် ပိုးပုဆိုး ဖက်ဖူးရောင် ၀တ်ဆင်ကာ ဇာတ်ခုံ
ပန်ပန၊်ရင်ငြိမ်းနွေး၊ချာတူး၊မနောဖြူလေး တို့က ကပ်ကျေးဗန်း၊စာအိတ်ဗန်း တို့ကို ကိုင်ဆောင်လျက် အသင့်ရပ်နေကြပါသည်။
“ခုချိန်ကစပြီး မန်းဂေဇက်ချစ်သူများစာပေဆု ချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပါသူများကို
ဆက်လက်၍ ပဒုမ္မာက ပန်ပန့်လက်ထဲမှ စာအိတ်ကို ရင်ငြိမ်းနွေးလက်ထဲမှ ကပ်ကျေးဖြင့် ဖွင့်ဖောက်၍ ဦးဦးပါ
လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ရာ ဦးဦးပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆန်ကာတင်စာရင်း ကြေငြာသွားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဆန်ကာတင်များ ရင်ခုန်စွာနှင့် စင်မြင့်ပေါ်တွင်နေရာယူအပြီးတွင် ဂျူလိုင်လအတွက်
အကောင်းဆုံးဆုရစာရေးသူအမည်နှင့် ပို့စ် အမည်ကို ကြေငြာပေးပါရန် အထူးဧည့်သည်တော်အား စင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွပါရန်
ဖိတ်ကြားရာ အထူးဧည့်သည်တော်ကြီးမှာ လေယာဉ် ဒီလေးဖြစ်သည့်အပြင် ရထားလမ်းရေကျော်ကာ
ဇာတ်လမ်းဖတ်ပြီး နောက်က Comment တွေဖတ်ရတာ လသာတဲ့ညမှာ စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ပြောနေကြသလိုပဲ ပျော်စရာကြီး …
ဘုန်းဘုန်းတွေကို ဦးတော်တင်လို့ “နစ္စဂီတတွေ မို့လို့မေတ္တာလက်မှတ်မပေးတာပါဘုရား။
၀ါဆိုထမင်းလေး ဘုဉ်းပေးသွားပါ”လို့ လျှောက်လိုက်ပါကြောင်း
မို့ ချို့ ဆီ ကို အိမ် တိုင်ရာ ရောက် ….အဲ….ပိုစ့် တိုင်ရာက် လာ ဖိတ် ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျေး ပါ။ စာပို့ သမားနောက် ကျ ပေမယ့် ….မိုချို ပဲ ..ဘယ် နေလိမ့် မလဲ …ပွဲခင်းထဲ အစော ကြီးထဲက ရောက်ပြီး အူတတ် နေတာ။
စတော့ကင်၊စကဒ်တို၊ကြိုးတချောင်းနဲ့ ပွဲခင်းထဲမှာအားလုံးနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပါကြောင်း..။
အခုဆို လူတစ်ယောက်ကို လစာပေးပြီးခေါ်ထားရတဲ့အနေအထားပါ… ယားရင်ကုတ်ဖို့ပါ…
ပွဲအပြီး ပွနေတဲ့အမှိုက်တွေအကုန်သိမ်းပြီးမှ ပြန်သွားပါတယ်ရှင့်
သားကို ပွဲ စီစည်သူတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဦးပီးပေါ်ကြီး ရှိထားနှင့်လို့ပါ
ကြိုဆို ဧည့်ခံရေးလောက်ဆို ရပါပီ
ရွာသူ ရွာသား လူစုံတတ်စုံမို့ ၀မ်းသာရပါတယ်
အန်တီပဒုမ္မာရဲ့ ရေးနိူင်ဖတ်နိူင်အားကို ကြည့်ပီး ” ငါတို့မအိုသေးဘူးနော်လို့” ပြောနေသလို ခံစားရပါတယ်။
ရွှီး … ရွှီး …. ဖြောင်း …ဖြောင်း
အာရပ်နွေဦးကို ဆီးရီးယားတွင် မီးဒုတ်သွားရှို့သူ
အောင်မယ် ၊ အောင်မယ် ၊ မောင်ရဲစည်။
မင်းက အရင်ကတော့ ဒီလူတွေ အိုနေပြီ လို့ တွေးနေခဲ့တဲ့ သဘောပေါ့လေ။
တောက်(စ်) (cr – ဂဂ)
ပွဲက နာမည်ကြီးပွဲဆိုတော့ ပွဲမစခင်ထဲက
ဘီအီးလေးဝင်ကစ်နေလို့ မင်းသမီးလေးပဒုမ္မာ မမြင်တာပါ…
ချူချူကျော်တိန်းရဲ့ နာဒေါ့မေ့လို့မရဒေါ့ဘူး…. ဆိုဒဲ့တချင်းလား
ရွာနဲ့အလှမ်းဝေးနေတာကြောင့် အခုမှဖတ်ရပီး အခုမှမန်းရလို့ ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်
မျှော်နေတုံး သဂျီးသမီးရောက်လာတာနဲ့ ၂ယောက်တွဲပြီး အတွင်းကြေ ဟစ်လိုက်တာပေါ့။
နွယ်ပင်နဲ့ ရာအိမ်မှူး တိုက်တိုက်လည်း ပျောက်နေတာကြာပြီ။
ရှေ့ထွက် မင်းသမီးလေးကတော့ အလွန်ချောမောလှပ သလို အက လဲကောင်းပါတယ်.. ၀ါသနာ အရင်းခံရှိတာကြောင့် အက ကောင်းတာ အထူးပြောစရာ မလိုပါဘူး ပွဲတိုင်းလိုလို ရုံပြည့် ကြည့်ရှု့အားပေးကြပါတယ် မင်းသမီးလေးဇာတိမှာ ကပြ တဲ့ပွဲ လူမရှိလို့ ခလေးတွေကို အင်းကျီ တယောက်တထည်စီပေးပြီး လာကြည့်ခိုင်းရတဲ့အဆင့်ထိ နာမည်ကြီးပါတယ် ..၀ါသနာကို..:(
ဒုတိယ မင်းသမီးလဲ စပွန်ဆာမရှာပဲ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းနဲ့ နာမည်ကြီးလာတဲ့ မင်းသမီး ….. ရုံပြည့်ရုံလျှံ အားပေးလာအောင် ဆွဲဆောင်မှု့ ကောင်းတဲ့မင်းသမီးတလတ်ပါ…အားပေးတဲ့သူရှိရင်ရှိ မရှိရင် ဗီနိုင်းပိုစတာ ကြီးထောင် လမ်း နှစ်ဘက်ပိတ် လာသမျှလူ အကုန်လုံး ဒန်ပေါက်ကြွေးပြီး ကြည့်ခိုင်းတော့တာပဲ…..:(
တတိယ မင်းသမီးကတော့ မြန်မာအက ကို ကမ္ဘာ ကသိအောင် အကနဲ့ ထိုးဖောက်နေတဲ့ မင်းသမီးလေးပါ အီဂျစ် ဆီးရီးယား လစ်ဗျား စသည့် နိင်ငံများအပြင် အီသီယိုးပီယား ဆိုမာလီ …..အခုလက်ရှိမှာတော့ ဖင်လန်မှ အင်္ဂလန် အင်္ဂလန်မှ ဖင်လန်
ကပြ နေတဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသမီးတလတ်ပါပဲ….:P
နောက်ဆုံးမင်းသမီးကတော့ စွယ်စုံ မင်းသမီးတလတ်ပါပဲ .. သန်လျှင်မြို့ ၇၈၆ ကြိမ်မြောက် မုတ်ဆိတ်မွေးနဲ့ တရုတ်ကြီးတွေ ဖုယားပွဲမှာနိင်ငံ အနှံ့အပြား လာရောက်အားပေးကြလို့ သင်္ဘောဆိပ်ခံတံတားကြိုးသွားရတာ မင်းသမီးရဲ့ အောင်မြင်မှု့တခုပါပဲ မကြာသေးခင်ကာလ တခုက ဆံပင်ဖြူတချောင်း တွေလို့ အငြိမ့်မင်းသမီးဘ၀ အနားယူတော့မယ် အသံထွက်ဘူးတယ်……
ဇာတ်ဆရာကြီးကတော့ အထူးမပြောတော့ပါဘူး သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ဟာ ရောင်းမကုန်လောက်အောင် နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်
၀ါဆိုမိုးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ ဇာတ်ထုတ်ဟာ သမိုင်းဝင် အောင်မြင်မှု့တခုပါပဲ….
မမ ပဒုမ္မာ ရေ
ကျနော်လည်း ကိုကြီးမိုက် လက်ဆောင်ပေးတဲ့ မြန်မာစာလက်ကွက်ကပ်ပြီး အခု ပထမဆုံး မန့်တာပါ။
စွယ်တော်ရွက် ကို လူကြီးစာရင်းထဲ ထည့်ပြီး ဘေးဖယ်ထားလိုက်တာပေါ့လေ။
ကျနော်ကတော့ လျပ်စစ်မီးပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်တွေယူပြီးလက်စွမ်းပြလိုက်မဟဲ့ လို့အားခဲထားခဲ.ရတာ၊
ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းက ၂ယောက်၊လှိုင်သာယာ က ၄ယောက် နဲ့ ၁၉ လမ်းက ၁ ယောက် စုစုပေါင်း ၇ယောက်တောင် စစ်ကူခေါ်ထားခဲ့သေးတာခင်ဗျ။
နောက်တစ်ပွဲ အတွက် Booking မှတ်ထားပေးပါဗျို့။
လူငယ်တွေနဲ့ ဘီဘီလေးကစ်တဲ့ ၀ိုင်းထဲ ၀င်ချင်သေးလား။
ကျမက စွယ်တော်ရွက် သင်တန်းတွေနဲ့ မအားရဘူးဆိုလို့ လုပ်အားပေးမခေါ်လိုက်တာပါ။
ကဲ Booking တဲ့နော်၊၀ိုင်းတော်သားတို့ရေ၊မှတ်ထားလိုက်ကြ။
GZ ရွာသူားတွေအားလုံးအလွမ်းပြေပြန်ဖတ်နိုင်အောင် မင်းသမီးလေးပဒုမ္မာလက်ရာလေးဗျို့
၂၀၁၂ ကတဲ့လား လွမ်းထှာ
လက်တွေ့မှာ တစ်ယောက်တစ်လက် ဝိုင်းဝန်းညီညာ မပံ့ပိုးကြ ဘဲ
ပါးစပ် က အော်နေတိုင်း သာ အရာရာ အောင်မြင်တိုးတက် ရင်ဖြင့်
ကျွန်မတို့ ရွှေပြည်ကြီး တိုးတက်တာ ကြာပြီပေါ့ရှင်။
ဒီ နာမည် တွေ ထဲ က သုံးလ မှ တစ်ခါဘဲ Post တင် ပြီး ရေးဦး။
ရွာထဲ သရဲချောက်စရာ အကြောင်းမရှိ။ :-(((
စောစောစီးစီး ရွာလယ် မှာ စုန်းမ တစ်ကောင် သောင်းကျန်းသွားပါကြောင်း။
ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရီ သွားးတယ်လို့ ..
တယ်လီနော နဲ့ အူရီဒူးဖိုးဂျီ ခေတ်မှာ ရောက်လာပြီးတော့များ.. ဟွန်း
ဖုန်းနဲ့ ကွန်မန့်ပေးရတာ လွယ်သလား ခက်သလား သဂျီး
ကျနော်တော့ အူရီဒူးနဲ့ ဖုန်းထဲက ဘရောက်ဇာ သုံးပြီး ဖုံးနဲ့ပဲ ရွာထဲဝင်နေတာ။
လိုင်းသိပ်မကောင်းချိန်တောင် ရွာထဲက ဝင်လို့ရတယ်။
အခု ကွန်မန့်တောင် ဖုံးနဲ့ပဲ ဝင်ပေးတာ။